CIN Khabar सुदूरपहाडी क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियो सूचनाको निर्विकल्प माध्यम
ममता भट्ट शनिबार, जेठ २१, २०७९, ०७:३३:००
डडेल्धुरा । बझाङको थलारा गाँउपालिका -४ का उन्नति उपाध्याय नियमित रेडियो सुन्नुहुन्छ।
उहाँले रेडियोबाट प्रसारण हुदै आएका विभिन्न जीवनोपयोगी कुराहरु सुन्दै आफ्नो जीवनमा लागु गर्दै आउनु भएको छ।
सुदूरपश्चिममा अझै विकराल रुपमा जरोे गाडेर बसेको छाउपडी प्रथाको बारेमा सन्देशमूलक सूचना, सामग्रीहरु सुन्दै छाउ बार्न छोड्नु भएको छ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सामुदायिक रेडियोहरुबाट छाउ बार्न हुदैन भन्ने कुरा धेरै सुनेँ । नबारेका धेरैका अनुभव पनि सुनेँ । उहाँहरुलाई त केही भएको छैन मलाई के हुने रैछ ? भन्दै मैले छाउ बार्न छाडेको छु, अहिले केही पनि भएको छैन।’ त्यसैले अरु कसैले केहि नभने पनि रेडियो सुन्यो भने धेरै कुराको जानकारी हुने रैछ ।'
उहाँ जस्तै डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका -५ का पुष्पा ऐडी अहिले १७ वर्षको हुनुभयो।
अहिले उहाँ कक्षा १२ मा पढ्नुहुन्छ। विश्वव्यापी रुपमा गत वैशाखमा नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर एकाएक फैलियो।
त्यसको बारेमा जानकारी पाउन र विद्यालयहरुको बारेमा थाहा पाउन उहाँले पनि रेडियो सुन्ने बानी बसाल्नुभयो ।
अहिले रेडियोले नै आफूहरुलाई सबै सूचना दिने रहेछ भन्ने कुराको महसुस गर्न थाल्नुभएको छ। उहाँले हिजोआज दैनिक रेडियो सुन्दै आएको पनि बताउनुभयो ।
अहिले रेडियो सुन्नका लागि रेडियो सेटबाट मोबाइल हुँदै इन्टरनेटका माध्यमबाट हरेक नागरिकहरुको हात-हातसम्म रेडियोको पहुँच पुगिसकेको छ।
प्रविधिले रेडियो सुन्नका लागि रेडियो सेट चाहिने जमानालाई बदलिदिएको छ।
त्यसैले अहिले रेडियो सुन्नेहरू सेटमा भन्दा धेरै मोबाइलमा भेटिन्छन्।
अमरगढी नगरपालिका ३ का गणेश साँउद सीआईएनले हरेक बेलुका साढे ७ र बिहान ६ बजे प्रसारण गर्ने 'साझा खबर' का नियमित स्रोता बन्नु भएको छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ 'साझाखबर' नसुनेपछि रातिको निन्द्रा नै लाग्दैन। देशभरिको खबर एकै ठाँउमा सुन्न पाइन्छ। र प्रत्येक समुदायका सवालहरु सुन्न पाईन्छ । म साँझ बिहान जसरी पनि साझा खबरको लागि समय निकाल्छु।'
सुदूरपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यावश्यक सूचना र जानकारी दिन रेडियोले ठूलो भूमिका खेलेको छ।
समुदायलाई परेको अप्ठ्यारोका बारेमा पनि रेडियोले छिटो थाहा पाउँछ। आफूलाई मन पर्ने वा सुन्न मन लागेको कार्यक्रमका लागि रेडियोले प्रसारण गर्ने समय कुर्नु पर्दैन।
प्रविधिले विभिन्न एप्लिकेशनहरूमार्फत आफ्नो फुर्सदको समयमा सुन्न सकिने बनाइदिएको छ।
आफूलाई मन पर्ने कार्यक्रमहरू मोबाइलमा वा कम्प्युटरमा डाउनलोड गरेर आफ्नो फुर्सदको समयमा सुन्न सकिन्छ।
त्यसैले पनि रेडियो मन पर्ने डोटीका रोशन कठायतको भनाइ छ ।
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका -५ का पार्वती चन्द अहिले ३५ वर्षको हुनुभयो।
उहाँको एउटा छोरी र एउटा छोरा छन्। उहाँलाई कोरोना महामारीले रेडियो सुन्ने बनाएको छ।
बच्चालाई कसरी पोषिलो खानेकुरा खुवाउने, आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्यको कसरी ख्याल गर्ने ? भन्ने कुराको जानकारी रेडियोबाटै थाहा पाएर अहिले बालबालिकाको स्याहारमा विशेष ध्यान दिन थालेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।
सुदूरपश्चिममा सहरको तुलनामा ग्रामीण भेगका नागरिकहरु बढी रेडियो सुन्छन।
अझ लैङ्गिक हिसाबले हेर्दा महिलाको तुलनामा पुरुषहरूले धेरै रेडियो सुन्ने गर्छन। ग्रामीण भेगका महिलाहरु काममा नै बढी व्यस्त हुन्छन।
रेडियो सुन्ने समय उनीहरुलाई कम हुन्छ तर जति समय रेडियो सुन्छन त्यो व्यवहारमा उर्ताछन् ।
स्थानीय विषयवस्तुका साथै संस्कृति र शैलीलाई रेडियोले अवलम्बन गर्ने हुनाले अन्य आमसञ्चार माध्यमको पहुँच भएका स्थानहरूमा समेत रेडियो प्रसारण लोकप्रिय बनेको छ।
स्थानिय भाषा र धार्मिक कुराहरु पनि रेडियोमा नै आउछन। त्यसैले दैनिक रेडियो सुन्दै आएको अमरगढि ५ का एक वृद्ध भुवनेश्वरी साउदले बताउनु भयो।
‘रेडियो बुढेसकालको साथि बनेको छ।’ उहाँले भन्नु भयो, 'सबै कुरा आउँछ धार्मिक कुराहरु साँझबिहान त्यहीँबाट सुन्छु। मलाई रेडियो सुन्न सारै मन पर्छ।'
मानव जीवनमा जति महत्व औषधि, पानी र खाद्यान्नको हुन्छ, त्योभन्दा धेरै महत्व सूचना र जानकारीको हुन्छ।
'विभिन्न विपद्मा भौतिक र मानवीय क्षति हुन नदिने र हानि-नोक्सानीबारे सचेत रेडियोले गराउँछ ।' भुवनेश्वरीले सुनाउनु भयो ।
सुदूरका ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियोहरुले जातीय छुवाछूत अन्त गर्न, दाइजो, बोक्सी, छाउपडी जस्ता कुप्रथा अन्त्य गर्न खेलेको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय भएको डडेल्धुरा क्याम्पस डडेल्धुराका प्रमुख गगांप्रसाद उप्रेति बताउनु हुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सामुदायिक रेडियोले शिक्षा स्वास्थ्य लगायत वन संरक्षण, जलवायु न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण जस्ता क्षेत्रमा खेलेको भूमिका सदैव प्रशंसनीय छ।’
प्रत्येक नागरीकको जिवनशैलीसँग मेल खाने कार्यक्रम र प्रत्येक समुदायका नागरीकलाई मध्यनजर गर्दै रेडियोहरुबाट कार्यक्रम प्रसारण हुने हुनाले पनि रेडियो प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
सुदूरपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रमा अझैँ पनि सामुदायिक रेडियोको लोकप्रियता घटेको छैन।
रेडियो मार्फत धेरै जानकारी र उपयोगी कुराहरु सुन्दै धेरैले आफ्नो दैनिकी नै फेरेका छन। ग्रामिण क्षेत्रमा अझैपनि धेरै ठाउँमा टेलिभिजन र नेट, इन्टरनेटको सहज पहुँच नहुनाले पनि रेडियो सुन्ने स्रोताको संख्या घटेको छैन।
सुदूरपहाडका दुरदराज क्षेत्रमा सुचना आदान-प्रदान गर्ने मुख्य सञ्चारमाध्यम सामुदायिक रेडियो हो। रेडियोबाटै हरेक नागरीकहरुले सुचनाको जानकारी पाउने गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २१, २०७९, ०७:३३:००
भट्ट डडेलधुराको रेडियो अमरगढीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
सुदूरपश्चिमका युवालाई भारत जान हतार (अडियोसहित)